XOG: Sheekh Shariif iyo C/raxman C/shakur oo ku kala tagay Qorshe ay Isbaheysi ku sameyn rabeen | Baahin Media
XOG: Sheekh Shariif iyo C/raxman C/shakur oo ku kala tagay Qorshe ay Isbaheysi ku sameyn rabeen
Warar hoose ayaa sheegeya inuu fashil ku dhamaaday qorshe ay doonayeen inay Xisbi midow ah ay ku sameystaan Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Siyaasiga Rug cadaaga ah ee Cabdi Raxmaan Cabdi Shakuur.
Maalmihi ugu dambeeyay Magaalooyinka Nairobi iyo Muqdisho waxaa socda kulamo looga arinsanayo Midowga Xisbiyada Himilo iyo Wadajir oo ay kala hoggaamiyaan Sheekh iyo Cabdi raxmaan Cabdi Shakuur Warsame.
Ex-Madaxweyne Sheekh Shariif ayaa ilo wareedyo u dhow waxay sheegayaan in durba uu sii bilaabay Ololaha uu ku doonayo in doorashada soo socota uu guul kasoo hoyo, balse wuxuu wadaa qorshe uu xulufo ku sameysanayo.
Xisbiyada ay kala hoggaamiyaan Labada Masuul ayaa shuruudo badan isku fahmi waayay, waxaana ay ku heshiiyeen in wada shaqeyn guud ay yeeshaan maadaama ay ku guul dareysteen inay midoobaan.
Sheekh Shariif ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay si hoose saameyn ugu lahaa siyaasadda Soomaaliya, isagoo Xulufeysi iyo Abaabul wada.
Maadaama ay gaba gabo mareyso Diiwaan galinta Xisbiyadda u tartamaya Doorashada soo socota waxaa lagu wadaa Xisbiyo badan lagu dhawaaqo Todobaadyada soo socda.